Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-Indiya ityhila ukukhula oku-Super kwiCandelo leDrone
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Tourism
Ukuthatha elinye inyathelo lokuqonda umbono odibeneyo we-Aatmanirbhar Bharat, uRhulumente oPhakathi phantsi kobunkokheli be-Nkulumbuso yase-India u-Shri Narendra Modi, ukhuphe imephu ye-airspace yase-India yokusebenza kwe-drone.
Uhlengahlengiso lomgaqo-nkqubo kwindawo yomoya yedrone iya kubangela ukukhula okuqhelekileyo kwinqanaba le-drone ezayo eIndiya.
Iidrones zibonelela ngezibonelelo ezininzi phantse kuwo onke amacandelo oqoqosho.
Ngenxa yamandla ayo emveli kwinto entsha, itekhnoloji yolwazi, ubunjineli obugcinayo kunye nemfuno yayo enkulu yasekhaya, i-India inamandla okuba yindawo yedrone yehlabathi ngowama-2030.
Imephu yedrone yomoya iza njengokulandela imigaqo yenkululeko yeDrone, 2021 ekhutshwe nguRhulumente oMkhulu nge-25 ka-Agasti 2021, inkqubo ye-PLI yeedrones ezikhutshwe ngoSeptemba 15, 2021, kunye nezikhokelo zeDatha yeGeospatial ekhutshwe ngoFebruwari 15, 2021. Lonke olu hlaziyo lomgaqo-nkqubo luya kubangela ukukhula okuqhelekileyo kwinqanaba le-drone ezayo.
KUTHENI IZINTO EZIBALULEKILEYO?
Iidrones zibonelela ngezibonelelo ezininzi phantse kuwo onke amacandelo ezoqoqosho. Oku kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwezolimo, ezemigodi, iziseko zophuhliso, ukubekwa kweliso, ukuphendula okungxamisekileyo, ukuthuthwa, imephu yendawo, ezokhuseleko, nokunyanzeliswa komthetho ukukhankanya nje ezimbalwa. I-Drones inokuba ngabadali ababalulekileyo bengqesho kunye nokukhula koqoqosho ngenxa yokufikelela kwabo, ukwenza izinto ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokusebenziseka lula, ngakumbi kwiindawo ezikude nezingafikelelekiyo eIndiya.
YINTONI EFANELEKILEYO KWEZI drone?
Ngombulelo kwimithetho emitsha, iskimu se-drone PLI kunye neemephu zedrone zomoya ezifikeleleka ngokukhululekileyo, iidrone kunye nezinto zokwenza imveliso yedrone zinokubona utyalomali ngaphezulu kwe-INR 5,000 crore kule minyaka mithathu izayo. Ingeniso yentengiso yonyaka yemveliso yedrone inokukhula ukusuka kwi-INR 60 crore kwi-2020-21 fold ukuya ngaphezulu kwe-INR 900 crore kwi-FY 2023-24. Umzi mveliso weedrone kulindeleke ukuba uvelise ngaphezulu kwe-10,000 yemisebenzi ngqo kule minyaka mithathu izayo.
Umzi mveliso weenkonzo zedrone, kubandakanya ukusebenza, ukwenza imephu, ukubek 'esweni, ukutshiza ngezolimo, ulungiselelo, uhlalutyo lwedatha, kunye nophuhliso lwesoftware, ukukhankanya ezinye, ziya kukhula ziye kwinqanaba elikhulu kakhulu. Kulindeleke ukuba ikhule ngaphezulu kwe-INR 30,000 crore kwiminyaka emithathu ezayo. Umzi mveliso weenkonzo zedrone kulindeleke ukuba uvelise ngaphezulu kwemisebenzi engama-500,000 kwiminyaka emithathu.
Imephu yendawo yomoya yokusebenza kwedrone iyafumaneka Iqonga lesibhakabhaka ledijithali ye-DGCA.